Uncategorized Archives - U.S. Embassy in Burma
အောကျဖျောပွပါအကွောငျးအရာအတှကျ ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ နကျပရိုကျဈကို ကိုးကားနိုငျပါသညျ – အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အတိုငျပငျခံ ဒဲရဈခြောလကျ ဟာ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံ အမွဲတမျးကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောမိုးထှနျးနဲ့ ဒီကနေ့ နယူးယောကျမှာတှဆေုံ့ခဲ့သလို မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အမြိူးသားညီညှတျရေးအစိုးရ ကိုယျစားလှယျတှနေဲ့လညျးတှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလိုတှဆေုံ့စဉျအတှငျး မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒီမိုကရစေီနဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှု အမွနျဆုံးပွနျလညျအသကျဝငျရေးက အရေးကွီးတဲ့အကွောငျး အလေးထားဆှေးနှေးခဲ့ကွသလို တိုငျးရငျးသား နဲ့ ဘာသာရေးအုပျစုတှအေပါအဝငျ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ တနျးတူညီမြှရေးကိုလေးစားတနျဖိုးထားရေးတှလေ‌ညျး ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။ မွနျမာပွညျသူတှေ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါ တုံ့ပွနျဆောငျရှကျရာမှာ အကူအညီပေးဖို့အတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ပိုမိုအားကောငျးအောငျ လုပျဆောငျရေးဆိုငျရာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး အမွငျခငျြးဖလှယျခဲ့ကွပါတယျ။ မွနျမာစဈအာဏာရှငျရဲ့ ကွောကျမကျဖှယျရာ အကွမျးဖကျမှုကြူးလှနျမှုတှကေိုရငျဆိုငျနရေတဲ့ မွနျမာပွညျသူလူထုအတှကျ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့ စူးစိုကျဆောငျရှကျမှုတှအေတှကျ အသိအမှတျပွုတဲ့အကွောငျးကိုလညျး အတိုငျပငျခံက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာ အတိုငျပငျခံက မွနျမာနိုငျငံ …
အိမျဖွူတျော မတျ ၁၂၊ ၂၀၂၁ ထုတျပွနျခကျြ ၁။ ဩစတေးလြ၊ အိန်ဒိယ၊ ဂပြနျနှငျ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု အကွား လေးနိုငျငံ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးအတှကျ ဆှေးနှေးပှဲကငျြးပ၍ မိမိတို့၏ ကတိကဝတျကို ထပျလောငျး အတညျပွုခဲ့ကွပါသညျ။ အစညျးအဝေးအတှငျး မတူကှဲပွားသော အမွငျရှုထောငျ့မြိုးစုံဖွငျ့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွပွီး လှတျလပျ၍ ပှငျ့လငျးသော အငျဒိုပစိဖိတျအတှကျ မိမိတို့အတူတကှ မြှဝကွေသော မြှျောမှနျးခကျြတဈရပျတှငျ တဈသားတညျးရှိကွပါသညျ။ ဒီမိုကရကျတဈစံတနျဖိုးမြားဖွငျ့ လှတျလပျသော၊ ပှငျ့လငျးသော၊ အလုံးစုံပါဝငျသော၊ ကနျြးမာကွံ့ခိုငျ၍ အပွနျအလှနျ ထိနျးကြောငျးပေးသော ဒသေတဈခုနှငျ့ အနိုငျထကျပွုမူမှုဖွငျ့ ထိနျးခြုပျကနျ့သတျ မထားသော ဒသေတဈခုဖွဈရေးအတှကျ မိမိတို့ ကွိုးပမျးအားထုတျပါသညျ။ ဤအပွုသဘောဆောငျသော အမွငျအပျေါ မိမိတို့၏ ပူးပေါငျးအားထုတျမှုသညျ နိုငျငံတကာ ဖွဈရပျဆိုး ၂၀၀၄ ခုနှဈ ဆူနာမီကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာခဲ့သညျကို မိမိတို့ ပွနျပွောငျးအမှတျရမိပါသညျ။ …
Remarks as prepared for U.S. Ambassador Scot Marciel Lincoln Scholarship launch Tuesday, November 26, 2019 Pathein Ballroom, Novotel Hotel, Yangon. အမရေိကနျ သံအမတျမှ အဖှငျ့အမှာစကား ကြှနျတျော မွနျမာနိုငျငံမှာ နလောတဲ့ သုံးနှဈခှဲအတှငျးမှာ နိုငျငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ အားတကျစရာထူးခြှနျတဲ့သူ ရာပေါငျးမြားစှာကို ဆုံတှခေဲ့ရပါသညျ။ တဈ‌ယာကျခငျြးစီက ၎င်းငျးတို့၏ လူ့အဖှဲ့အစညျးနှငျ့ နိုငျငံအတှကျပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ အနာဂတျကို ထူထောငျနိုငျရနျ အားသှနျခှနျစိုကျကြိုးပမျးလကျြရှိပါသညျ။ ဒီမှာရှိတဲ့ လူငယျခေါငျးဆောငျ မြားကလညျး မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ကမ်ဘာကွီးကို ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ နရောတဈခုဖွဈစရေေး နညျးလမျးမြားရှာဖှကွေံဆရနျ တီထှငျဆနျးသဈလကျြရှိပွီး သံဓိဌါနျ ခထြားကွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က မွနျမာနိုငျငံအောငျမွငျတာကို မွငျလိုပါသညျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနမှေ့ာ …
FOR IMMEDIATE RELEASE November 26, 2019 အမရေိကနျပွညျထောငျစုတှငျ သှားရောကျပညာသငျကွားပွီး မဟာဘှဲ့မြားရရှိနိုငျမညျ့ Lincoln Scholarship နှငျ့ပတျသကျ၍ သံအမတျကွီးက ထုတျပွနျကွငွောခွငျး ရနျကုနျမွို့ – အမရေိကနျသံအမတျကွီး Mr. Scot Marciel က မွနျမာနိုငျငံတဈဝှမျးမှ လူငယျခေါငျးဆောငျ ၁၀၀ နီးပါးတို့ Lincoln Scholarship ဖွငျ့ အမရေိကနျတက်ကသိုလျမြားတှငျ အရညျအသှေးမွငျ့မဟာဘှဲ့မြားရယူနိုငျမညျဟု အမရေိကနျ သံအမတျ Mr. Scot Marciel က ထုတျပွနျ‌‌ကွငွောခဲ့ပါသညျ။ သံအမတျကွီး Mr.Scot Marciel က “ အမရေိကနျပွညျထောငျစုက မွနျမာနိုငျငံ အောငျမွငျသညျကို မွငျလိုပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မိမိတို့က ဤနိုငျငံအနှံမှ လူငယျခေါငျးဆောငျမြားကို Lincoln Scholarship အစီအစဉျအသဈဖွငျ့ ပံ့ပိုးပေးနခွေငျးဖွဈပါသညျ။ ဤ …
ယမန်နေ့ကမြစ်ကြီးနားတွင် ကိုလွမ်းဇောင်း၊ ဒေါ်နန်ပူနှင့် ကိုဇော်ဂျတ်တို့ကို အသရေဖျက်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ခြောက်လ နှင့် ဒဏ်ငွေ ချမှတ်လိုက်သည့်အတွက် မိမိတို့ များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ ယင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာရေးနှင့် တိုက်ပွဲများအဆုံးသတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူများဖြစ်ကြပြီး ပဋိပက္ခကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသူများအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများရရှိရေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေကြသူများလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုတွင် ဤသို့သောလှုပ်ရှားမှုမျိုးသည် ချီးမွမ်းထိုက်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး တရားစွဲရန်မဟုတ်ပေ။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်းစဉ်းစားသုံးသပ်ရန် တာဝန်ရှိသူများကို မိမိတို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၈။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ — အမေရိကန်သံရုံးက နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်သော Women of Change ဆုရရှ်ိသူ သုံးဦးကို သံအမတ်ကြီးမာစီရယ်လ်က ယနေ့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူအားလုံး၏ အခွင့်အရေး ပိုမိုတိုးတက်စေရေးနှင့် ဤနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူနေမှုဘဝများအတွင်းက အမျိုးသမီးတ့၏ို အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ထားရှိသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်စေသော အမျိုးသမီးများကို ဤဆုဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ပြည်သူလူထုရဲ့ လူနေမှုဘဝတွေ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပိုမိုတိုးတက်စေဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ပြည်သူတွေကို အားပေးကူညီဖို့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။ ဒီ Women of Change Award ဆု ပေးအပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတော်တော်များများ ဆောင်ရွက်နေကြတာတွေထဲကမှ ထူးထူးခြားခြား ဆောင်ရွက်တာတေကွို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” …
အဆွေတော်သမ္မတကြီး ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်၌ ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အတွက် ဂုဏ်ယူပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အကောင်းဆုံးဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသားများက ပြောကြားအပ်ပါသည်။ အဆွေတော်၏နိုင်ငံအောင်မြင်မှု အဓွန့်ရှည်ရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးတို့အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများက အတည်ပြုထောက်ခံခဲ့သော ဒီမိုကရက်တစ်စံတန်ဖိုးမှာ အဓိကအရေးပါလျက်ရှိနေသေးပါသည်။ ဒီမိုကရက်တစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မိတ်ဆွေအနေနှင့်ရော လက်တွဲဖက်နိုင်ငံအနေဖြင့်ပါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိနေပါမည်။ ရိုးသားစွာဖြင့် ဒေါ်နယ် ဂျေ ထရမ့်
ယခုလက်ရှိ ဒဂုံမြို့နယ်၊ တော်ဝင်လမ်းတွင် တည်ရှိသော ရန်ကုန်အမေရိကန်စင်တာ (American Center Rangoon) သည် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနှင့် အင်းယားလမ်းထောင့်တွင် မကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မည့် ရန်ကုန်အမေရိကန်စင်တာ (American Center Yangon) အသစ် မဖွင့်လှစ်မီ အကြိုအနေဖြင့် အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်အသုံးပြုသွားပါမည်။ လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားသောစင်တာကို နေရာအသစ်တွင် ၂၀၁၇ နှောင်းပိုင်း၌ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့် အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည့် ရန်ကုန်အမေရိကန်စင်တာ (American Center Yangon) အမည်သစ်က လက်ရှိစင်တာ၏ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာအမွေအနှစ်ကို သာမက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ အကြား နက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံရေးကိုလည်း ထင်ဟပ်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေသော မြန်မာ့သမိုင်းဝင် သင်္ကေတ ကရဝိတ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအလံ၏ အစိတ်အပိုင်းတို့က အမေရိကန်စင်တာရန်ကုန် (American Center Yangon) က ကိုယ်စားပြုသော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် …
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများ သို့မဟုတ် မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့ရသည့် ပြည်သူများကို ကူညီပံ့ပိုးရန် အကူအညီအသစ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်အား ဒေါ်လာငါးသန်း ($5million) ပေးအပ်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာရုံးက သဘောတူညီလိုက်ပါသည်။ ယခုပေးအပ်သောအကူအညီသည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီလိုအပ်နေသည့် လူပေါင်း ၁၇၂,၀၀၀ အတွက် အသက်ကယ်စားရေရိက္ခာ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ကာလကြာရှည်နေပြီဖြစ်ပြီး ပြန်လည်၍ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသည့် ပြည်သူအရေအတွက်မှာ တိုးပွားလျက်ရှိပြီး အရေးပေါ်အကူအညီများလည်း လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခန့်မှန်းခြေ ပြည်သူ ၃၈၃,၅၀၀ ခန့်မှာ အစားအသောက်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်နှင့် မိမိတို့၏ ကာလရှည်ကြာ …
ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ ။ နှစ်သစ်အတွင်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဆော်သြခြင်းနှင့်အတူ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးမာစီရယ်လ်သည် နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် ရရှိလာသော အောင်မြင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အတွင်းမှ မိတ်ဖက် ဧည့်သည်တော်များကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ၌ ၎င်း၏နေအိမ်သို့ ဖိတ်ကြား ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားသို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာတင်ထွဋ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကျင်ကျင်ဝင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မင်းသိုက်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျုံတင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် မုန့်လုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်း၊ အမေရိကန်ဂျုံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ Winrock International တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် မြန်မာအစိုးရနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ …
တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီနှင့် မြန်မာတပ်မတော်တို့အကြား ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်သံရုံး အနေဖြင့်များစွာစိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။ အထူးသဖြင့်ရှမ်းနှင့်ပလောင်တိုင်းရင်းသား လူ့အသိုက်အဝန်းများအား ဦးတည်၍ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မိပါသည်။ အရပ်သားများအပေါ် အကာအကွယ်ပေးရေးအပါအဝင်ပဋိပက္ခဘေးသင့်ပြည်သူများထံသို့လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများ အတားအဆီးမရှိသွားရောက်နိုင်ရေးသည်နိုင်ငံတကာ၏ အခြေခံကျသောမူဖြစ်ပါသည်။ ထိုးစစ်ဆင်နေမှုများသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် တည်ဆောက်နေသည့်ယုံကြည်မှုကိုပျက်ပြားစေပါသည်။ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ရန်အတွက် စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းတရားကိုကျင့်သုံးကြရန်နှင့်ကတိကဝတ်ကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ကြရန်အားလုံးကို မိမိတို့တိုက်တွန်းပါသည်။ သို့မှသာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းနေမည်ဖြစ်ပြီး နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များလည်း နေရပ်သို့ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့၏ ဘဝများကိုပြန်လည် ထူထောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။